Deprivation ka-parental amalungelo umama - njani kwaye kuba oko
Deprivation ka-parental amalungelo umama — njani kwaye kuba oko
Bale mihla sociologists qaphela ukuba wonke umntu kunye inani divorces kuphela ukwanda, kwaye ubuso okanye kubekho abantwana akusebenzi omeleze usapho ngayo nayiphi na indlela. Mhlawumbi oku ngenxa utshintsho kwi private ubomi couples, ngenxa kaninzi umfazi ngu banyanzeleka okanye consciously ukutshintsha iindima kunye umntu, asinguye wonke ubani likes kuyo. I-umzamo ‘share’ umntwana omnye uninzi ngokufanayo disputes kwi-wokuqhawula umtshato, kodwa deprivation ye-parental amalungelo umama idla kwenzeka ngaphantsi rhoqo kunokuba uyise. Xa wokuqhawula umtshato ngu ezininzi amatyala umntwana ihlala kunye nonina, njengoko bale mihla zasekuhlaleni umthetho ikholelwa ukuba yena kungcono nako zikhathalele kuye kwaye adequately educate, wanikela kuye ubukhulu ingqalelo. Inxalenye le yinyaniso, ngenxa psychologically umfazi ngu kaninzi kukufutshane ukuba umntwana, kwaye ingabi yakhe obubobakhe, nkqu oyintanda, umyeni. Ukuqonda ukuba yintoni ekubeni deprived ka-parental amalungelo, kufuneka jonga Usapho Ikhowudi.
Kwi-bale mihla iimeko deprivation ka-parental amalungelo umama kwenzeka ukuba yena akazange athathe umntwana wakhe ephuma esibhedlele okanye ezinye childcare iziko ukuba ubani zonyango uhlengahlengiso iinyanga ezintandathu, kodwa kuphela ukuba yena akazange kuba okulungileyo kwaye semthethweni izizathu oku.
Ngexesha elinye, imathiriyali iimeko umfazi kunye negqiza ubudala unako ukuthathelwa ingqalelo
Kuya kufuneka kanjalo kubekho ukuyinyamezela khumbula ukuba umama akufunekanga zikhathalele umntwana kwaye kuwuthabatha na isaziso kuye, kwezinye iimeko, umama wakhe ke parental amalungelo azinako sirhoxisiwe. Ezona ngokufanayo kwaye uninzi ‘loluntu ‘injongo ka-deprivation wamalungelo ukuba umntwana kwi-bale mihla iimeko ngu cruel unyango avoidance yakhe ngqo parental uxanduva, beatings okanye kwendlela kakubi. Ukuba umzali ngokugqithisileyo ulwaphulo-mthetho intentionally ngokuchasene wakhe umntwana, uya kanjalo uya kubandezelwa ilungelo lakhe nawuphi na amalungelo. Enye usebenza coercion ukuba vagrancy okanye begging, naziphi na ezinye iintlobo ezininzi ezonakeleyo umntwana exploitation. I-bale mihla ilungelo kanjalo uqwalasela ukuba inadmissible i-upbringing yomntwana yi-chronic alcoholics okanye drug addicts, ngoko ke abantu abo constantly gwenxa kweziyobisi ezifana * ingaba zahlukane kwi-nkqubo wemfundo kwaye ukumiselwa kwebandla oyedwa.
Ukucinga njani ukuphika parental amalungelo umama, kufuneka baqonde ukuba unako ukwenza oku kuphela ngoncedo inkundla
Nawuphi na umntwana ke, abazali, lakhe ngokuzalwa, umntwana ke ummeli okanye ulondolozo lwempilo iziko angafaka isicelo enkundleni. Kule meko, guardianship igunya kufuneka necessarily inxaxheba, apho kufuneka useke inyaniso imo imicimbi kwi-usapho, ukuba kuyimfuneko, involve amapolisa amagosa ukuba qinisekisa ezithile iinyaniso. Theoretically, kubalulekile babekholelwa ukuba umntwana unako kanjalo zichaziwe yakhe uluvo lwam, kodwa ukuba contradicts i kunokwenzeka izibonelelo kuba umntwana, kuya hayi ukuthathelwa ingqalelo. I-deprivation ye-parental amalungelo umama kuthetha yakhe inability ukwenza nawuphi na determinative izigqibo kuba umntwana, umzekelo, khetha bakhe indawo yokuhlala. Nangona kunjalo, unina ngu obliged ukuxhasa wakhe kunye nabantwana, nkqu ukuba yena akakwazi inxaxheba zabo upbringing. Yena unako ukwenza oku voluntarily, okanye umgcini ngokusemthethweni unako ukuqokelela alimony ngokusebenzisa inkundla, kwaye umama ngu deprived ka-ilungelo ilifa emva kokuba umntwana wakhe. Kubalulekile babekholelwa ukuba nawuphi na umzali abo wenziwe deprived yamalungelo imfundo, unelungelo ukubuyisela yakhe amalungelo ngaphakathi enkundleni, kodwa inkundla iimfuno okulungileyo izizathu oku. Unozala ngu obliged ukuba kuvavanya ukuba yena akakwazi kukhokela inkqubo antisocial indlela ubomi, ingaba ukutya ingeniso kwaye yokuhlala, sele iphelile wakhe ingakumbi ezinobungozi imikhuba in ifomu ye utywala okanye iziyobisi
Umamkeli inkcazelo kwaye intsingiselo Collins English Dictionary